ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဒေသများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝဇိရာလင်္ကရဏ (Rama X)
သမ္မတ & လက်အောက်ခံလွှတ်တော်ဥက္ကဌ
သံတမန်ရေးရာမစ်ရှင် / ထိုင်းနိုင်ငံ
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဗီဇာလိုအပ်ချက်များ ဗီဇာမူဝါဒ
ထိုင်းနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင်စည်းလုံးသောပြည်နယ် ဖြစ်သည်။ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အက်ဥပဒေ ၁၉၉၁တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) ဤအက်ဥပဒေအရဝန်ဆောင်မှုများကို ဗဟို၊ ပြည်နယ်နှင့် ဒေသန္တရအဆင့်သုံးခု ခွဲထားသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ · ပတ္တရားမြို့
ဗဟိုအစိုးရတွင် ဝန်ကြီးဌာနများ(ราชการส่วนกลาง)၊ ဗျူရိုများနှင့်ဌာနများ(กระทรวงทบวงkrasuang tha-buang krom)တို့ ပါဝင်သည်။ ဝန်ကြီးဌာနများ(ทบวง tha-buang)နှင့်ဌာနများ (ทบวง tha-buang) တစ်ခုစီကို ဝန်ကြီးတစ်ဦး(รัฐมนตรี ratthamontri)မှဝန်ကြီးများက ဝန်ကြီးများကောင်စီ(คณะรัฐมนตรี Khana Ratthamontri)မှ ဦးဆောင်သည်။ ဗျူရိုကရေစီတစ်ခုသည် လွတ်လပ်သော အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တူညီသော အဆင့်ရှိသည့် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ရှိနိုင် လက်ရှိတွင် ဌာနများမရှိပါ။ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဌာနများကို ဌာနများ(กรมkrom)အဖြစ် ခွဲခြားထားသည်။ ဌာနတစ်ခုစီကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်သည့်(ထိုင်း: นายกรัฐมนตรี; RTGS: nayok rattha montri)နှင့် ဝန်ကြီးအဆင့်အတန်းကို သမုတ်သော။ လွတ်လပ်သော ဗဟိုအစိုးရအေဂျင်စီများလည်း ရှိသည်။ ဤအေဂျင်စီများသည် မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဗျူရိုသို့မဟုတ် ဌာနအောက်တွင်ရှိသော်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်၏ တိုက်ရိုက်လက်အောက်ခံ ဖြစ်သည်။သူတို့၏ခေါင်းစဉ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
တော်ဝင်အိမ်ထောင်စုဗျူရို (ထိုင်း: สำนักพระราชวัง; RTGS: samnak phra ratcha wang) (BRH)
အမျိုးသားရဲအေဂျင်စီ (ထိုင်း: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ; RTGS: samnak ngan tamruat haeng chat) (NPA)
ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားရုံး (ထိုင်း: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; RTGS: samnak ngan phra phuttha satsana haeng chat) (ONaB)
ထိုင်းနိုင်ငံတော်ဝင်အင်စတီကျု (ထိုင်း: ราชบัณฑิตยสถาน; RTGS: ratcha bandittaya sathan) (RIT)
တောင်ပိုင်းနယ်စပ်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးစင်တာ (ထိုင်း: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้; RTGS: sun am nuai kan borihan changwat chai daen phak tai ) (SBPAC)
ပြည်နယ်အစိုးရ(ราชการส่วนภูมิภาค) ပြည်နယ်များတွင် ပါဝင်သည်(จังหวัด changwat). As of ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ (၂၀၁၈ -၁၂-၃၁)[update]နေ့အထိ ပြည်နယ် ၇၆ ခုရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဦးဆောင်သည်(ผู้ว่าราชการจังหวัด phu wa ratchakan changwat)နှင့် ခရိုင်သို့ခွဲခြားထား(อำเภอ amphoe)သည်။ As of 2010[update]ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ခရိုင် ၈၇၈ ခုရှိခဲ့သည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်မြို့တော် (อำเภอเมือง amphoe mueang)တစ်ခုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ချင်းမိုင်ခရိုင်၏ မြို့တော်သည်ချင်းမိုင်မြို့နယ် (อำเภอเมืองเชียงใหม่ Amphoe Mueang Chiang Mai)ဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်မှနတ်ခွန်းစီးအယုဒ္ဓယပြည်နယ်နှင့် မြို့တော်ခရိုင်နှစ်ခုလုံးအမည်အတူတူဖြစ်သည်။ ခရိုင်တစ်ခုချင်းစီကို(นายอำเภอ nai amphoe)အကြီးအကဲတစ်ဦးချင်းစီ ဦးဆောင်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ အချို့သောပြည်နယ်များတွင်အသေးစား(กิ่งอำเภอ king amphoe)ခရိုင်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့ ခရိုင်ဒေသခံများအနည်းငယ်သာ ခရိုင်၏ဖွဲ့စည်းရန် အာမခံချက်မပေးသော ကြီးမားသောဧရိယာများတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အသေးစားခရိုင်တစ်ခုစီကို(ปลัดอำเภอ palat amphoe)ခရိုင်က ဦးဆောင်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ခရိုင်အကြီးအကဲများနှင့်ခရိုင်စာရေးများကိုဗဟိုအစိုးရမှခန့်အပ်သည်။
↑ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၁၉၉၁အပိုင်း ၃
↑ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ပုဒ်မ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၄၊ ၂၅ နှင့် ၂၇
↑ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ပုဒ်မ ၂၄ နှင့် ၂၅
↑ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ပုဒ်မ ၇၊ ၉ နှင့် ၁၆
↑ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ပုဒ်မ ၇၊ ၃၁၊ ၃၆ နှင့် ၃၇
↑ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ ဇွန်လ၂ရက် ၂၀၁၉ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ပုဒ်မ ၅၁၊ ၅၄ နှင့် ၆၁
↑ အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၊၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ပုဒ်မ ၆၂
↑ တော်ဝင်အင်စတီကျု့အဘိဓာန် ၁၉၉၉ (in ထိုင်း)။ ထိုင်းနိုင်ငံတော်ဝင်အင်စတီကျု (၂၀၀၇)။ ၂၀၀၉-၀၃-၀၃ တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၀၅-၀၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “กิ่งอำเภอ (กฎ) น. ท้องที่ที่มีความจำเป็นในการปกครอง แยกมาจากอำเภอที่มีเขตท้องที่กว้างขวางแต่จำนวนประชากรไม่มาก หรือที่ที่มีชุมชนมากแต่ท้องที่ไม่กว้างขวางพอที่จะตั้งขึ้นเป็นอำเภอ มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้าปกครอง”
↑ LOCAL PERSONNEL ADMINISTRATION B.E. 2542 (1999)။ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဘန်ကောက်မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အက်ဥပဒေ၁၉၈၅ခုနှစ် (in ထိုင်း)။ ထိုင်းနိုင်ငံကောင်စီ (၂၀၁၃-၁၁-၂၉)။ 20 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၀၅-၀၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
အမျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေ၁၉၉၁ခုနှစ် (in ထိုင်း)။ Council of State of Thailand (2010-11-26)။ 25 January 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-05-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ပတ္တရားမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အက်ဥပဒေ၁၉၉၉ခုနှစ် (in ထိုင်း)။ ထိုင်းနိုင်ငံကောင်စီ (၂၀၁၁-၀၈-၀၄)။ 20 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၀၅-၀၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဒေသန္တရအစိုးရအက်ဥပဒေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာခေတ်၁၉၁၄ခုနှစ် (in ထိုင်း)။ ထိုင်းနိုင်ငံကောင်စီ (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁)။ 29 November 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၀၅-၀၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဌာနခွဲကောင်စီများနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအက်ဥပဒေ၊၁၉၉၅ခုနှစ် (in ထိုင်း)။ ထိုင်းနိုင်ငံကောင်စီ (၂၀၁၃-၁၂-၁၂)။ 20 October 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၀၅-၀၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၉၇ခုနှစ် (in ထိုင်း)။ ထိုင်းနိုင်ငံကောင်စီ (၂၀၁၃-၁၁-၁၉)။ 18 February 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၀၅-၀၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် ထိုင်းမြေပုံ နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း၊ ရှေ့သို့ဦးတည်ခြင်းသို့ပြန်ခြင်း (in ထိုင်း)။ သန်းခေါင်တက္ကသိုလ် (၂၀၁၂)။ ၂၀၁၄-၀၅-၀၂ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်းနိုင်ငံ၏_အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဒေသများ&oldid=692910" မှ ရယူရန်
Articles containing potentially dated statements from ဒီဇင်ဘာ 2018
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။